လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသောဖုန်းမှာ မိမိအတ္တအရ အထွက်ခေါ်ဆိုမူခေတ္တရပ်ထားပါတယ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသောဖုန်းမှာ မိမိအတ္တအရ အထွက်ခေါ်ဆိုမူခေတ္တရပ်ထားပါတယ
လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသောဖုန်းမှာ မိမိအတ္တအရ အထွက်ခေါ်ဆိုမူခေတ္တရပ်ထားပါတယ
Posted by htet way on Mar 18, 2012 in Aha! Jokes, Satire | 17 comments
ဖုန်းတစ်လုံးကိုင်ဖို့နယ်မှာတော်တော်ခက်ခဲနေခဲ့တာ အခုတော့ တန်ဖိုးနည်းဖုန်းတွေရောင်းနေတော့ ရဲခေါင်ဘတင့် ၀ယ်လိုက်တယ် ၀ယ်တယ်ဆိုတာလည်းအရစ်ကျစနစ်ကြောင့်ဝယ်နိုင်ခဲ့တာပဲ။
ဟမ်းစက်ကိုလေးသောင်းနဲ့ဝယ်လိုက်တယ်။ဖုန်းက နယ်မြို့မှာ ကြိုးဖုန်းတွေရှိတယ် ။အထွက်ကောက တစ်မိနစ်ကို ၂၅ကျပ်ပဲရှိတယ်။ ရဲခေါင်တို့ ဖုန်းက တစ်မိနစ်၅၀ကျပ်။စီဒီအမ်အေတွေလည်း တစ်မိနစ်၅၀ကျပ်။
ဖုန်းလက်ထဲရောက်ကတည်းက တသသပေါ့။အိပ်လည်းအိပ်ရာထဲမှာထားရ၊အပြင်ထွက်လည်းခါးမှာချိတ်ရ၊မနက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်လည်း ဖုန်းကအဓိကယူသွားရတယ်။မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း
ဖုန်းနံပတ်ပေးရ၊ဘာအလုပ်မှ မယ်မယ်ရရမရှိပေမယ့် လိပ်စာကဒ်လေးရိုက်ထားရတယ်။ဟန်ပါပါလေးဝေငှလိုက်၊ စကားစရှာရင်းပေးလိုက် ဖုန်းနံပတ်ပါတယ်လေ။ဖုန်းဆက်နော်လို့လည်း မမေ့မလျှော့ပြောရသေး။
တစ်နေ့တစ်နေ့ ကိုယ်က ဟိုခေါ်ဒီခေါ်ခေါ်ရတယ်။မျောက်အုံးသီးရသလိုမျိုး။
ဟဲလို အိအိခိုင်လား …ရဲခေါင်ဘတင့်ပါ။ အိမ်မဲမှာနေတယ်လေ….ဟောမေ့နေပြီလား တလောက ပုသိမ်ကားပေါ်မှာ ဖုန်းနံပတ်ပေးခဲ့တယ်လေ။အိုကေ ..ဖုန်းဆက်ပါ။
ဟဲလို…. ဦဖြူဖွေးလား ဆောင်းပါးကောင်းတယ်။ထပ်ရေးပါ။အားပေးနေမယ်
ဟဲလို…..ဒေါ်ဂွက်ထော်လား ၊ရွာသာယာကမလား ဦးပိတ်ရဲ့သားလေ..မှတ်မိလား ဒါကျွန်တော့်ဖုန်းလေ…နောက်ကိစ္စရှိဆက်နော်။
ဤသို့ ဤနှယ်ဆက်သွယ်မူများပြုပြီး သကာလ ရဲခေါင်ဘတင့် ဖုန်းပိုးဝင်နေခဲ့လေတော့သည်။ဖုန်းကဒ်ကလည်း ခဏပြီးခဏငွေသွင်းရ၊ ပိုက်ဆံကာဒ်ကလည်းကုန်လှချည်လားလို့ အဖိုးကညည်းတာကို ရဲခေါင်ဘတင့်ကမကြိုက်။သူကတော့ ဖုန်းဆက်ရတာ သဘောတွေ့နေသည်။
ခါးကြားကဖုန်းသံမြည်လာတော့ ရဲခေါင်ဘတင့် လူပုံ လလယ်မှာ ဟန်ပါပါထုတ်လိုက်သည်။သို့သော်ဖုန်းလိုင်းက မရှိတော့ Miss Call မစ်ကော စာသားပေါ်နေသည်။ အင်္ဂလိပ်လိုကလည်း မတတ်တော့ ဘာရေးထား
ဟလို..ခုဏကျွန်တော်ဖုန်းကိုခေါ်တာဘယ်သူလဲဟင်…ဟုမေးတော့ ….ငါချောင်းဝပိုင်းက လှအေးပါ ဖုန်းစမ်းကြည့်တာပါ။အော်အေးဒါပဲလား……..။
တီတီတီ……..ဖုန်းသံမြည်လာသည်။ ရဲခေါင် ဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ရပြန်သည်။ Miss Call မစ်ကောပဲ။အခုဟာက ကြိုးဖုန်းနံပတ်ပေါ်လာသည်။
ဟေ့ရဲခေါင်…ငါကြက်ဖတစ်ကောင်လောက်လိုချင်တယ် မင်းရောင်းမယ့်သူတွေ့ရင် ဖုန်းဆက်လိုက်။ မင်းနေကောင်းလား။ဟိုကောင်မလေးနဲ့ရော အဆင်ပြေလားကွ..အေးကွာ ဆက်ကြိုးစားကွ………..
လှအေးကရှေ့ဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေပြောနေသည်။တဆွေးတနွေးပြောသည်။ဖုန်းတောင်ပူလာသည်။အင်း ငွေကဒ်ကလည်းကုန်ခါနီးနေပြီ။ရဲခေါင်ဘတင့် ဖုန်းကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ငုံ့ကြည့့််နေလိုက်မိသည်။
တီတီတီ…….ဖုန်းသံမြည်လာသည်။ ဟလို ရဲခေါင်ပါ ….။
အေးငါအေးကြည်မပါ အထက်ပိုင်းကလေ..နင့်ကိုငါပြောစရာစကားရှိတယ် ပြန်ခေါ်လိုက်နော်။
အော်အေးကြည်မ ..လူပုံက ဖုန်းလေးတကိုင်ကိုင်နဲ့ ငွေကုန်မှာလည်းစိုးသေးဟု ရဲခေါင်တီးတိုးရေရွတ်လိုက်မိသည်။ ဘာကိစ္စလည်းမသိရ၍မိမိဘက်ကခေါ်ရမည်လေ။မတော် ကိုယ်ကြိတ်ပိုးနေတဲ့ ရတနာအကြောင်းများပြောလေမလားဟူသောစိတ်ဖြင့် ဖြေးညင်းစွာဖုန်းခလုတ်တွေကိုနိပ်မိသည်။
ဟလို ..အေးကြည်မလား ..နင်ဘာပြောစရာရှိ်လဲ။
ဒီလိုပါ ငါအကူညီတစ်ခုတောင်းမလို့ …နင်သူငယ်ချင်း တင်အောင်က ငါ့ကို ချစ်စကားပြောထားပြီး အခု ဟယ် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ် အဲ့ဒါ …….။ငါက မိန်းကလေးလေ…နင်သိတယ်မလား အသက်ထက် အရှက်က…….။
ရဲခေါင်ဖုန်းပိတ်လိုက်သည်။ သင်းကိစ္စတောင်ငွေကုန်မှာ နှမျှောနေတဲ့ကောင်မ လင်ထရူးမ ဟု ရေရွတ်ဆဲလိုက်မိသည်။တီတီတီ…တီတီတီ…တီတီတီ……………။
မက်ဆေံဝင်လာပြန်ပြီ ။ဘိုလိုဘာတွေရေးထားသည်မသိ။ You call my phone .တဲ့။ ဖုန်းခေါ်ခိုင်းတာဖြစ်မယ်။နံပတ်က …ဟာ ရတနာဖုန်းနံပတ် ဟဲလို ရတနာလား…
အော်လူတွေ ဖုန်းလေးတကိုင်ကိုင်နဲ့ အရီးမြတို့ကြတော့လည်း ဖုန်းကို ပြောစရာရှိမှ ဖွင့်တယ်။အချိန်ပြည့်ပိတ်ထားတယ် ပိုက်ဆံကုန်မှာစိုးလို့၊ ခင်မြင့်တို့ကြတော့လည်း ကိုယ်က ဘယ်တော့မှစမခေါ် အမေ
နေမကောင်းလို့ ဆေးရုံတင်ရမှာတောင် ညီမဆီ ဖုန်းဆက်မပြော စက်ဘီးနဲ့ သွားပြောတယ်။ကြိုးဖုန်းကိုင်သူတွေကျတော့လည်း တစ်မိနစ် ၂၅ကျပ်တောင်ကုန်မှာစိုးလို့ အရေးကြီးကိစ္စတွေရှိလည်း တဖက်လူ ဆက်တာစောင့်နေတယ်။ကဲ ဘယ်လိုလူတွေလဲဟုရဲခေါင်ဘတင့်တွေးမိလေတော့သည်။မိဂျမ်းစိန်ကြတော့လည်း ဖုန်းဆက်ဖို့ မက်ဆေံပို့ရတာနဲ့။ ဟော အေးကြည်မကလည်း မစ်ကောလုပ်ရတာနဲ့။
ရဲခေါင်ဘတင့်လည်း နေ့ခင်းဘက် တစ်နေကုန်အိပ်နေလိုက်သည်။ဖုန်းလည်းပိတ်ထားခဲ့သည်။ညဆယ့်တစ်နာရီထိုးတာနဲ့ ငေါက်ကနဲထပြီးဖုန်းခလုတ်နိပ်တော့သည်။
ဟလို……ကို စည်သူနဲပ စကားပြောချင်လို့ပါ။ ဟုတ်ကျွန်တော် ရဲခေါင်ဘတင့်ပါ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး..အရေးမကြီးပါဘူး ဟို သင်္ဘောဘယ်နေ့တက်မှာလဲ သိချင်တာပါ..ဟုတ်ကဲ့ ..ဟုတ်ကဲ့
ဟလို……ကမ်းကြီးလား အော်ကဗျာရေးသေးလားလို့ မတွေ့တာကြာပြီ စုံတောက်ကို ကဗျာတွေ့ပို့ပါ စာသမားပဲသည်းခံလိုက်ပါ…။
ဟဲလို ဆရာထက်လား …ရဲခေါင်ဘတင့်ပါ ။
ဟေ့ကောင် ဒါအိပ်ချိန်ကွ ..ဘာတင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးကုမပေးဘူး ကျိုးလို့လား အဆစ်လွဲတာလား။
မဟုတ်ပါဘူး ရဲခေါင်ပါ ရွာထဲရောက်သေးလား ဘာစာတွေ………
ဟေ့ကောင်လူလိုနားလည်နော်…ငါက ဆေးဆရာကွ လူနာဆိုရင်ပြောမယ်… ဘာညာကိကွတွေလာမပြောနဲ့ မင်းငါသိတယ်…..မင်းစိတ်ရောဂါသည်ပဲ ငါလာမယ် သည်းခြေဆေးရှိတယ်
မဟုတ်ရပါဘူးဆရာ………..။ကျွန်တော်ရဲခေါင်ပါ ဖုန်းကငွေကဒ်တွေကုန်လွန်းလို့ပါ ညမှ ဆက်ရင် တ၀က်ဈေးဆိုလို့………….။
ဟေ့ကောင်….ဘာတွေပြောနေတာလဲ ပိုက်ဆံကုန်မှာစိုးရင် ဖုန်းမကိုင်နဲ့ ကြာားလား အိပ်ရေးပျက်တယ် …ငါဆရာထက်ကွ ကမ္ဘာဖျက်သွားမယ် ..စနေသားနော်ဟင်း…ဟင်း ။
ရဲခေါင်ဘတင့်လည်း အနှီသို့ပြောခံရသောအခါ ဖုန်းချလိုက်ရလေတော့သည်။ထိုအချိန်တွင်ပင် မစ်ကော(Miss Call) ၀င်လာလေသောအခါ…………။
ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်လို့ ခံစားရတာတွေ ကို satireလုပ်တာပါ။မိတ်ဆွေတွေကိုက
ချစ်လို့စတယ်မှတ်ပါ။ အခု ကျွန်တော်ဖုန်းကဒ်ကုန်နေပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ တယ်လီဖုန်းကို ပြန်ကြည့်ချင်းဖြစ်၏ .. ကျွန်တော်လည်း ဖုန်းဖိုးသုံးတာများနေလို့ ဘရိတ်အုပ်ထားရကြောင်းပါ) …
ဖုန်း ဆိုသောဖုန်း တကယ်သုံးက
အိမ်တွင်းသူခိုး ဖြစ်လတ္တံ. ။
ဆ၇ာထက် တာတေ စနေသားမှန်း သိပါပြီ။
ပြောရင်လည်း ၁၁နာရီဆို တစ်ဝက်ဈေး မပိုင်ဘူးလား
u call me ….ok
no money in my phone.
ရဲခေါင်ဘတင့်ကို နမူနာယူပြီး ..
ဆရာထက်ဆီ ဖုန်းဆက်လို့ မဖြစ်ချေတော့ …
မတော် နာပါ ရွာသာဂျီး ရောက်သွားမှ ..
၀ဋ် ဆိုတာ မနေပါဘူး….
စာနဲ့ ကွန်မန့်နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်ရတယ်ဦးဦး။
သို့သော်….ဆိုင်တာကို ကျွန်တော်သိနေတယ် တခြားလူမသိ။
ဒီနေ့ မနက်၉နာရီမှာ မဆလာစက်ကနေ..ကုန်ဈေးတန်းက ပရဆေးဆိုင်မှာဈေးဝယ်တယ်။
၁၁နာရီထိုးတော့ တောင်ဒဂုံက စာရေးဆရာအကြည်တော်ဆီ စာပေဟောပြောပွဲဖိတ်ဖို့ကိစ္စ
သွားတယ်။မသွားတတ်လို့ ကားငှားသွားပါတယ်။ပြန်လာတော့ လိုင်းကားစီးလာတယ်။ဆူးလေရောက်ခါနီးမှာကိုဘလက်ဆီကဖုန်းဝင်တယ်။အကို ညနေက
ဖုန်းဆက်တာ ဘာကိစ္စလဲ…တဲ့။ကိစ္စထွေထူးမရှိပါဘူးဗျာ တွေ့ချင်တယ်ဆိုတော့ ..ချိန်းဗျာတဲ့။
ဟလို..ဦးဦးပါလေရာလား…ကျွန်တော်ကိုပြန်ခေါ်ပါ ကဒ်ကုန်နေလို့ပါလို့ ရှက်ရှက်နဲ့ပြော
လိုက်ရပါတယ်။အမှန်တော့ ငွေကဒ်ဝယ်ချိန်မရလိုက်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ အခုထည့်ပြီးပါပြီ
လက်မတစ်ချောင်း ကေဘီဇက်က လွှဲလိုက်မယ်တဲ့
ည၈နာရီမှာကျွန်ပ် အလုပ်နားခွင့်ရ၍ ဒေါ်သိန်းတင်လမ်းထဲတွေ့ရာဆိုင်တစ်ဆိုင်၌
ဟလို ဦးရဲခေါင်ဘတင့်လား ဟလို……..ဟလို…….ဟလို………. (လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသောဖုန်းမှာ စောင်ကြားထဲ သို့မဟုတ် ပေါင်ကြားထဲသို့ရောက်ရှိနေပါသဖြင့် ခေါ်ဆို၍မရ နိုင်ပါချင်)
ဟလို ဦးရဲခေါင်ဘတင့်လား ဟလို……..ဟလို…….ဟလို………. (လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသောဖုန်းမှာ စောင်ကြားထဲ သို့မဟုတ် ပေါင်ကြားထဲသို့ရောက်ရှိနေပါသဖြင့် ခေါ်ဆို၍မရ နိုင်ပါချင်)ဟိဟိ စတာနော်
ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ကိုရဲခေါင်ဘတင့်ရေ…….
ခင်ဗျားရဲ့ကျောချင်းကပ်လျက်မှာကျွန်တော်ရှိနေတယ် ဘာဗျ တုန်းမရှိလို့ဘာမှမကြားရဘူး
တယ် ခေါင်းပိတ်ခေါက်လိုက်ရ ဟေ…….အသံနဲနဲကြည်တယ်ဟုတ်လား…………..
ဖုန်းပိတ်ထားတာတောင်ကျုပ်အသံကြားတုန်းပဲဟုတ်လား ဒီလိုပဲဗျ မြန်မာ့ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်က…..
ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ …… ညနေကြမှအွန်လိုင်းမှာတွေ့မယ်ဟုတ်လား…..
ညနေသို့ရောက်သော် ကိုရဲခေါင်ရေ……..ခင်ဗျားအခုထိုင်နေတဲ့နက်ဆိုင်မှာ ခင်ဗျားရဲ့တစ်ခုံကျော်မှာ
your post is error by net connection…….ထို့ကြောင့် အကြောင်းကြား၍မရနိုင်ပါရှင်။
လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသောတယ်လီဖုန်းမှာ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်ရှိ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပသို့ရောက်ရှိ
ဟေ့လူ ကိုရဲခေါင် ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ် အခုပဲ မိုက်ခရိုဝေဖ့်တိုင်အောက်မှာဖုန်းသွားပြောမယ်လာ…….
ခင်ဗျားဖုန်းဖွင့်ထားတယ်မလား…… အင်း ဒါဆိုခုပဲဖုန်းကို အိတ်ထဲကနေအပြင်ထုတ်ထား ကျုပ်ထပ်ခေါ်မယ်
စကားချပ်။…………..။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဟန်းဖုန်းကိုင်တာနဲ့၊အင်တာနက်အသုံးပြုရတာ…..မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့
အဆုံးအမတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ခန္တီစတရားကို ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုအား indirectနည်းဖြင့် ကျင့်ကြံခြင်းဖြစ်သော
ကြောင့် သေသောအခါ ဗြဟ္မာ့ပြည်လားရာ၏။
ဟဲဟဲ ဆရာထက် စိတ်ဆိုးဘူးမဟုတ်လား ကျွန်တော်လည်း ဝင်ဖောက်ကြည့်တာ……